” လက်စတာစီးတီးအသင်းမှ ဘယ်ဂျီယံ ကြယ်ပွင့် ကွင်းလယ် ကစားသမား တိုင်လီမန်း ကို ပြောင်းရွေ့ ကြေး 65 သန်းနဲ့ ကမ်းလှမ်းလိုက်တဲ့ ယူနိုက်တက် “ – Sport Gaber
ပရီးမီးယားလိဂ္ အင္အားျကီး အသင္း 1 သင္း ျဖစ္တဲ့ ယူႏိုက္တက္အသင္း သည္ လက္စတာစီးတီးအသင္းမွ ဘယ္ဂ်ီယံ ျကယ္ပြင့္ ကြင္းလယ္ ကစားသမား တိုင္လီမန္း ကို ေျပာင္းေရြ့ ေျကး 65 သန္းနဲ့ ကမ္းလွမ္းခဲ့တယ္လို့ သိရဘာတယ္ ။
တိုင္လီမန္းသည္ 2019 ခုႏွစ္မွာ မိုနာကိုအသင္းကေန လက္စတာစီးတီး အသင္းကို အငွားနဲ႔ေျပာင္းေ႐ႊ႕ခဲ့ၿပီး လက္စတာအသင္းက တိုင္လီမန္း ရဲ့ ေျခစြမ္းကို ႀကိဳက္ႏွစ္သက္တာေၾကာင့္ အဲဒီႏွစ္ကုန္မွာပဲအၿပီးသတ္ေခၚယူခဲ့တာပါ။ တိုင္လီမန္း သည္ ၿပီးခဲ့တဲ့ 2020 2021 ရာသီမွာ လက္စတာအသင္းအတြက္ အေကာင္းဆုံးကစားေပးခဲ့ကာ FA ဖလားခ်န္ပီယံျဖစ္ေအာင္ ကူညီေပးခဲ့တဲ့အျပင္ အမွတ္ေပးဇယား အဆင့္5ေနရာမွာ ရပ္တည္ႏိုင္ေအာင္ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။
ယူႏိုက္တက္အသင္း သည္ လက္စတာအသင္းမွာ တိုင္လီမန္း အငွားနဲ႔ လာကစားခဲ့ခ်ိန္ကတည္းက တိုင္လီမန္း ကိုေခၚယူဘို့. ေစာင့္ျကည့္ခဲ့ေပမယ့္ ကစားသမားက လက္စတာအသင္းနဲ႔အၿပီးသတ္စာခ်ုပ္ခ်ုပ္ဆိုခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။
ပရီးမီးယားလိဂ် အင်အားကြီး အသင်း 1 သင်း ဖြစ်တဲ့ ယူနိုက်တက်အသင်း သည် လက်စတာစီးတီးအသင်းမှ ဘယ်ဂျီယံ ကြယ်ပွင့် ကွင်းလယ် ကစားသမား တိုင်လီမန်း ကို ပြောင်းရွေ့ ကြေး 65 သန်းနဲ့ ကမ်းလှမ်းခဲ့တယ်လို့ သိရဘာတယ် ။
တိုင်လီမန်းသည် 2019 ခုနှစ်မှာ မိုနာကိုအသင်းကနေ လက်စတာစီးတီး အသင်းကို အငှားနဲ့ပြောင်းရွှေ့ခဲ့ပြီး လက်စတာအသင်းက တိုင်လီမန်း ရဲ့ ခြေစွမ်းကို ကြိုက်နှစ်သက်တာကြောင့် အဲဒီနှစ်ကုန်မှာပဲအပြီးသတ်ခေါ်ယူခဲ့တာပါ။
တိုင်လီမန်း သည် ပြီးခဲ့တဲ့ 2020 2021 ရာသီမှာ လက်စတာအသင်းအတွက် အကောင်းဆုံးကစားပေးခဲ့ကာ FA ဖလားချန်ပီယံဖြစ်အောင် ကူညီပေးခဲ့တဲ့အပြင် အမှတ်ပေးဇယား အဆင့်5နေရာမှာ ရပ်တည်နိုင်အောင် စွမ်းဆောင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။
ယူနိုက်တက်အသင်း သည် လက်စတာအသင်းမှာ တိုင်လီမန်း အငှားနဲ့ လာကစားခဲ့ချိန်ကတည်းက တိုင်လီမန်း ကိုခေါ်ယူဘို့. စောင့်ကြည့်ခဲ့ပေမယ့် ကစားသမားက လက်စတာအသင်းနဲ့အပြီးသတ်စာချုပ်ချုပ်ဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။